13th May, 2021 Thu १७:३१:०३ मा प्रकाशित
जसपाका सांसदहरु राखिएको रिसोर्ट र रिसोर्टभित्र देखिएका गाडीहरु ! -तस्विर खबरडबली
काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका सांसदहरू एकै ठाउँमा भेला भएका छन्। उनीहरुलाई भक्तपुरको डोलेश्वर मन्दिर जाने बाटोमा पर्ने डोलेश्वर रिसोर्टमा राखिएको हो ।
नाम नबताउने शर्तमा भक्तपुरका एक सुरक्षाअधिकारीले भने, –‘माननिय ज्युहरुले जानकारी त गराउनुभएको छैन, तर उहाँहरु डोलेश्वर रिसोर्टमा भेला भएको सुचना आएको छ ।
स्रोतका अनुसार डोलेश्वर रिसोर्टका संचालक मनाेज केसी र डोर भण्डारी नामका एक सामान्य व्यवसायि देखिएपनि सोही निर्बाचन क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सांसद महेश बस्नेत, सुर्यविनायक नगरपालिकाका मेयर बाशुदेख थापा, ८ नं. वडाका अध्यक्ष किरण थापा लगायतकाको लगानीमा संचालन भएका स्थानीयहरु बताउँछन् । यो भक्तपुरको सुविधासम्पन्न रिसोर्ट हो ।
यि सबै जनप्रतिनिधिहरु नेकपा एमालेबाट निर्बाचित र ओली समुहसँग आवद्ध छन् । रिसोर्ट १२/१५ भन्दा बढी गाडीहरु आएको स्थानीयले बताएका छन् ।
स्राेतका अनुसार भक्तपुरको सुर्यविनायक नगरपालिका ८ को सिपाडोलस्थित डोलेश्वर भिलेज रिसोर्टमा एमाले नेताहरुको लगानी समेत रहेको छ । लगानीकर्ताहरु बस्नेत निकट हुन् । १३ सांसदको व्यवस्थापनमा स्वयं महेश बस्नेत, सुर्यविनायक नगरपालिकाका मेयर वासुदेव थापा, डोलेश्वर भिलेज रिसोर्ट रहेको वडा नं ८ का अध्यक्ष किरण थापा सक्रिय छन् । थापा उक्त रिसोर्टका लगानीकर्ता पनि रहेको बुझिएको छ । रिसोर्टमा ठाकुर पक्षीय सांसदहरु राजेन्द्र महतो, विमल प्रसाद श्रीवास्तव, अमृता अग्रहरी, चन्दा चौधरी, उमाशंकर अरगरिया, दुलारी देवी खंगा, प्रमोद साह, रानी मण्डल, नरमाया ढकाल, निर्जला राउतलगायत छन् ।
सांसदहरूलाई रिसोर्टमा व्यवस्थापन गर्न वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पनि साथमै रहेका छन्। ‘कुन रिसोर्टमा भन्न मिल्दैन। यहाँ राजेन्द्र महतो पनि हुनुहुन्छ। सबै व्यवस्थापन गरेर उहाँ फर्किनुहुन्छ,’ ती सांसदले भने। जसपाका बहुमत सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरे पनि ठाकुरले १३ सांसदलाई मात्रै रिसोर्टमा भेला गराउन सकेका हुन्।
ठाकुर र महतोले बिहीबार दिउँसो नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेका थिए। उनीहरुबीच के कुरा भयो भन्ने बाहिर आएको छैन। देउवालाई भेटेर आएपछि अध्यक्ष ठाकुर र महतो पक्षको सांसद भेला भएका हुन्।
वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा मागेको विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएका छन्। दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमतको सरकार दाबी गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन पेस गर्ने आज बेलुका ९ बजे अन्तिम समय तोकिएको छ। समयसीमा अगावै निवेदन पेस नभए संविधान ७६ ९३० अनुसार संसद्मा रहेको सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्।